Haldoorka Dalka Somaliland… | Somaliland Today
← “Anigu Wax Dhibaato Ah Uma Arko Haddii Xisbiga KULMIYE Markale Soo Sharaxo Madaxweyne Silaanyo”. Jamaal Cali Xuseen
Madbacada Qaranka Oo Dabooshay Daabacaada Waraaqaha Kaadhka Jinsiyadda. →
Haldoorka Dalka Somaliland…
Adna waxay ku dhalatey magaalada Hargaisa waxay waxbarashada ka bilowday dalka Jabuuti waqtigaas wadanku muu lahayn iskuulada hablaha
Adna Adan Ismaciil
Waxaa mahad iska leh ILAHAY (SWT) ii fududeeyay inaan mowducan idinla wadaago. Waxaan maanta donayaa inaan ka hadlo mowduuc aad u xiiso iyo dhiirigalin badan, waa qof aad ugu muhiima bulshada reer Somaliland waa ADNA ADAN ISMACIIL. Qof walba oo wax qabtey waxaa dhiiri galin u ah in looga mahad celiyo lana xuso. Akhris wanaagsan baan idiin rajeynayaa.
Maxaad ka taqana Adna
Adna waxay ku dhalatey magaalada Hargaisa waxay waxbarashada ka bilowday dalka Jabuuti waqtigaas wadanku muu lahayn iskuulada hablaha, waxaa kadib markii u horeysay magaalada Burco laga furay iskuulkii hablaha, Adna Adan waxay ka noqotey kaaliye macalin madama dumarkii waxbarayey ay English ku hadlayeen waxay u
turjumi jirtey ardeyda. ardeydaa waxa kamida marwada kowaad ee Somaliland Amina Waris. Adna waxey deeq waxbarasho ka heshay sanadkii 1954 dalka Ingriiska adna abaheed wuxuu ahaa dhakhtar hoyadeedna cilmi bey lahayd sidaa darteed waxa u fududaatey ineey waxbarsho ugu baxdo dalalka dibada.
Waxay ahayd qof ku firfircoon waxbarashada dhinacwalba yadoo ka gali jirtey kaalmaha ugu sareeya ee kalaska yadoo waqtigaa ku dadali jirtey iney u hiliso jinsiyadeeda si ay dadka u tusto iney dadka madow leyihiin cilmi. waxay laba sanoo tababara ka qadatey jamacad ku taal dalka ingriiska, kadib waxay bilowdey kalkalinta oo sadex sano ku qadatey shahdada cilmigaas. waxay kaloo ay ku takhasustey umulisinimada waxayna qadatey shahadadeeda labaad 1961. 8-1961 waxay ku noqotey magalada Hargeysa.
Waxay ka shaqo gashay cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa halkaas ayay 21 bilood waxay ku shqeyneysay tabaruc yadoon waxtigaa la ogalayn iney dumarka darajadaas leh qataan MUSHAHAAR. Kadib waxaa loo bandhigay barlamkii Somalia dood ah sidii adna adan loo siin lahaa darajo iyo mushahar. Waxa keentey in dumarku waxbarasho heli jirin sidaadarteed arintani ahayd markii ugu horeysey.Adna waxay rabtey iney dumarka wado u furto tasoo u suura gashay yadoo u samirtey iney waqti badan ku shaqeyso si lacag la aan ah. 1963 waxay isguursadeen maxamed ibrahim cigaal waxay u guurtey Muqdisho waxayna macalimada ka noqotey halkaas. Waxay kaloo oo ka soo shaqeysay ururka cafimaadka aduunka. Masoo koobi karno Adna Adan tariikhnololeedkeedi waxaan isku dayaaya intii ugu muhiimsaneyd inaan soo qadano.
Maxay Adna ka qabatey dalka Somaliland
1997 waxay ku soo noqotey magalada hargeisa yadoo rabtey iney ka furto hospital. Adno Hospital ayay waqtigaas bilowday dhismihiisa. Dhismaha dhakhtarka waxa kala qeyb qatey Adna ganacsadayaashii reer somaliland iyo calamka. Dhaqtarkaasi wuxuu cawimaad u fuliyaa dhamaan haweenka somalailand ku nool. Dhakhtar kaliya maha ee waana jamacad ay kasoo baxaan dhalinyaro cilmi balaadhan u leh arimaha cafimaadka
2002 waxay noqotey wasiirkii ugu horeyay ee dumara ee Somaliland xil ka qabatey. waqtigaas oo ay rabtey iney wado dhinaca siyasada ah u furto dumarka. Wasaradii labaad ee ay qabatay waxay ahayd wasarada arimaha dibada oo ay ka soo hoysay hormar la taaban karo. Waxay la kulantey madax aad u fara badan oo ay kala hadashay aqoonsiga somaliland.
Waa qof aad u qaliya oo ka qeyb qadatey dhinaca waxbarasha,siyaasada iyo arimaha bulsha. Hadaan nahay haweenka reer Somaliland waxaan mahad baladhan gaadhsinaynaa Adna waxaan lenahay ILAHAY cimrigaaga ha dheereyo.
intaaas waaxaan ku soo gabagabeynayaa tariikhdii adna adan anoon soo koobi karayn hadana wax yar ka soo qatey. Waxaan umahad celinayaa dhamaan akhristayaasha.
Waxaan warbixintan kasoo heley telifishinka qaranka Somaliland.
Waa qalinkii: Samaara Maxamed Xarbi Email: samaara0909@gmail.com